လက်ရှိအချိန်မှာကိုင်ရအဆင်ပြေပြီး Meta Hero. တွေနဲ့ Comboလို့ကောင်းတဲ့ Angela - Myanmarload
လက်ရှိအချိန်မှာကိုင်ရအဆင်ပြေပြီး Meta Hero. တွေနဲ့ Comboလို့ကောင်းတဲ့ Angela
လွန်ခဲ့သော ၈ လ က 20:13 October 27, 2020
Mobile Legends ကိုဆော့တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဖြင့် လူတော်တော်များများ အသင်းအတွက် Carry လို့ကောင်းတဲ့ Hero တွေကို ရွှေးချယ်ကြပါတယ်။ သို့သော် Tank ကိုင်ပေးတဲ့ Player ဒါမှမဟုတ် Support ကိုင်ပေးတဲ့ Player တွေကတော့ ခပ်ရှားရှားရယ်ပါပဲ။ တခါတလေ ကိုယ်တွေ Support ကိုင်မယ်ဆိုရင်တောင် Blame ကြတဲ့ အဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဒါပေမဲ့လဲ Support ဆိုတဲ့ Role ဟာတော့ Tank တွေလို ရှေ့ကနေ မခံပေးနိုင်ပေမဲ့ ကိုယ့်အသင်းတစ်ခုလုံးကို သွေးတွေပြန်ဖြည့်ပေးနိုင်ပြီး ရန်သူတွေကို လမ်းပျောက်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အဲ့လို Support ထဲမှာ Angela လေးဟာဆိုရင်တော့ လူတိုင်းချစ်ကြတဲ့ Support လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ အားလုံးပဲသိကြတဲ့အတိုင်း ကိုယ့်အသင်းက Hero တွေကို ကောင်းကောင်းကြီး Support ပေးနိုင်ပါတယ်။ ရန်သူကြားထဲ အဓိက Carry တစ်ကောင်သွားတဲ့အခါ Angela လေးက အလိုက်တသိ အဲ့ Hero ထဲဝင်သွားပြီဆိုရင် Wipeout ပါပဲ။ ဒါကြောင့်ပဲ Angela ကို လူချစ်များပြီး မ Blame ကြတာပါ။ Carry ထဲမဝင်ပဲ Tank ကြီးထဲ ဝင်လိုက်လို့လဲ Blame ဖို့မလိုပါဘူး။ Angela က Battle ဆိုင်နေချိန်မှာ Ulti ကိုသုံးပေးလိုက်ရုံနဲ့ တာဝန်ရဲ့ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကပြီးနေပါပြီ။ ကျန်တာက Skill 1 သုံးပေးလိုက်2သုံးပေးလိုက်ရုံပါပဲ။
တွဲဆော့လို့ကောင်းတဲ့ Hero တွေကတော့ အများကြီးပါပဲ...အထူးသဖြင့် Fighter, Assassin နဲ့ Tank တို့နဲ့တွဲလုံးကောင်းပါတယ်။ Mobile Legends ဆော့ရင် ချစ်သူဖြစ်သွားကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကို ပရိတ်သတ်ကြီးလဲကြားဖူးကြမှာပါ။ အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ကိုတိုင်လဲ ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Angela ကိုကောင်းကောင်းကစားတက်အောင် Train ထားပါ။ မိန်းကလေးတွေအတွက်တော့ Angela က Cupid ဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဲ့လို ကိုယ်က ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ကစားနိုင်ပြီဆိုရင် Crush နဲ့အတူ ကစားတဲ့အခါ Angela ကို Pick ပြီး Crush ကြွေသွားအောင်ကစားပြလိုက်ပါ။ ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကောင်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
သတင်းအရင်းမြစ် Own Creation
Page generated in 0.1646 seconds with5database query and6memcached query.